University of Erlangen Nuremberg - Baro Abroad in Europe
gaabinta : FAU
aasaasay : 1742
Ha iloobin in aad wada hadlaan University of Erlangen Nuremberg
Qor at University of Erlangen Nuremberg
University of Erlangen Nuremberg waa jaamacad cilmi dadweynaha magaalooyinka reer Erlangen iyo Nuremberg in Bavaria, Germany. magaca Friedrich-Alexander ka timaadaa aasaasaha ugu horeysay ee jaamacadda Friedrich, Margrave of Brandenburg-Bayreuth, oo ay ka sokay Christian Frederick Charles Alexander, Margrave of Brandenburg-Ansbach.
In Germany, jaamacadaha fanka deeqsi ah dhaqanka inta badan ma dugsiga injineernimada ama waaxda. Si kastaba ha ahaatee, FAU leedahay awood ah injineernimada kala duwan.
FAU waa jaamacadda labaad ee ugu weyn gobolka ee gobolka Bavaria. Waxay leedahay 5 Caqlina, 23 waaxaha / dugsiyada, 30 waaxaha caafimaad, 19 waaxaha goboleedka, 656 Professor, 3,404 xubno ka mid ah shaqaalaha waxbarashada iyo qiyaastii 13,000 shaqaalaha.
In simistarka jiilaalka 2014/15 ku dhowaad 39,085 ardayda (lugu daro 3,556 ardayda ajinebiga ah) dhigta jaamacadda ee 239 beerihii waxbarasho, ku saabsan 2/3 waxbarashada campus Erlangen iyo haray 1/3 at campus Nuremberg ah. Tirakoobkani saaray FAU in liiska top 10 jaamacadaha ugu weyn ee Germany.
In 2013, 5251 ardayda ka qalin jaamacad iyo 663 doctorates iyo 50 theses post-phD ayaa ka diiwaan gashan. Waxaa intaa dheer, FAU helay 171 milyan oo Euro (2013) maalgelin dibadeed ee isla sanadkaas, waa mid ka mid ah dhinac saddexaad ee jaamacadaha maal ee Germany Adag samaynta.
In 2006 iyo 2007, oo qayb ka ah hindisaha heer qaran, FAU loo doortay by ugu Foundation Research Jarmal mid ka mid ah guuleysatay ee Excellence Jaamacadaha Jarmal ah Initiative. FAU sidoo kale waa xubin ka mid ah DFG (Jarmal Research Foundation) iyo Maareeyayaasha Top Industrial for network Europe.
In ciidmada Academic of Jaamacadaha Adduunka ee sannadka 2014, FAU ka mid ah jaamacadaha Jarmal ee Engineering / Technology iyo group Sciences Computer kaalinta labaad oo dhan afar xuduudaha darajayn TOP, FUN, HiCi iyo Pub.
Kulliyadda Humanities, Social Sciences, iyo Theology
Kuliyada Business, dhaqaalaha, iyo Sharciga
1743 - University waxaa la aasaasay by Margrave Friedrich of Brandenburg-Bayreuth
University ee Erlangen la aasaasay ruuxa absolutism iftiimiyey. shaqo ee jaamacadaha Jarmal ee qarnigii siddeed iyo tobnaad wuxuu ahaa in ay u adeegaan baahiyaha madaxda badan by samaynta xeerarka ee waxbarasho iyo tababar ee shaqaalaha rayidka ah si kor loogu qaado sumcadda amiirrada.
Tani waxay sidoo kale ahayd isha Ra'iisul dhiirogelin for Margrave Friedrich of Brandenburg-Bayreuth kii aasaasay-Friedrichs Universität in uu madax ku 1743 gargaarka ee Margravess Wilhelmine iyo madax sare ugu horeysay ee Jaamacadda, Daniel de Superville.
Waxaa la jaamacad saddexaad la aasaasay Franconia, ka dib markii ay jaamacadaha Altdorf iyo Würzburg, oo ahayd mid ku salaysan in magaalada Imperial ee Erlangen akadeemiga geesigeeda hore ee ku yaal Hauptstraße. furitaanka rasmiga ah ee Jaamacadda dhacay 4 November 1743, dhacdo oo weli xuso sanad kasta at academicus dhinto.
1769 - Jaamacadda ayaa la ballaariyo by Margrave Alexander
In maalmood hore, University ee Erlangen ahaa mid ka mid ah hay'adaha ugu yar ee noociisa ah. Wadar ah 64 ardayda ayaa ka diiwaan gashan University cusub ee sanadka ah ee ay aasaas iyo baray by 16 Professor; tirada celcelis ahaan ardayda ku hadhay ee agagaarka 200 markii qaar ka mid ah.
The ugu horeysay labaatan sano dhowr ah jiritaanka University ayaa lagu calaamadeeyay by dhibaatooyinka dhaqaale tan iyo margraviate ee Brandenburg-Bayreuth ahaa yar oo aan si gaar ah qaniga ah. Waxa aan ahaa ilaa 1769, marka line Bayreuth ka soo dhintay iyo margraviate ee Brandenburg-Bayreuth waxaa la midoobin, in Brandenburg-Ansbach, in Friedrichs-Universität la siiyey sal adag dhaqaale. In sharaf of Margrave Alexander, taliye cusub, oo sidoo kale ahaa si ay u noqdaan sokoeye ugu horeysay weyn University ee, Jaamacadda waxaa magacooda loo baxshay Friedrich-Alexander-Universität in isla sanadkaas.
kala duwan ee dhaqanka ee nidaamo waxaa la baray Caqlina Theology gudahood, Law, Medicine iyo Philosophy. ka madaxtooyada Hohenzollern reebo taas oo, sida guriga si Dowager ah, kaliya door dadweynaha in yarna, magaalada yar margravial of Erlangen lahayn siyaasadeed oo muhiim ah, hay'adaha dhaqaalaha ama dhaqanka, iyo Professor Jaamacadda ayaa hadda helay xaaladda badan bulshada ee magaalada gudahood.
1810 - Franconia qayb ka mid ah Bavaria noqdo
Konton sano ka dib markii ay aasaas, Jaamacadda maray isbedel weyn oo ay sabab u tahay weearay. wareejinta awoodda taajka Prussian in 1792, in boqortooyadii Faransiiska ee 1806 iyo ugu dambeyntii in taajkii Bavarian in 1810 loo bedelay Jaamacadda margravial galay hay'ad dawladdu maamusho a. Iyada oo ay tani la micno tahay in laga badiyay inta badan ay madaxbannaani, sida ay awood u gaar ah iyo mudnaanta gaar ah siiyo muwaadinka jaamacadda, waxa kale oo soo hagaagay dhaqaalaha ee jaamacadda ee.
Tirada ardayda soo baxday oo ka hadhay joogto ah ilaa 400 xiligaan. Qorshaha in xarumaha waxbarashada jaamacadeed ee jaamacadda Landshut, jideeyey by Wasiirka Bavarian ee State, Maximilian Joseph Montgelas, loogu tala galay in ee bilowgii qarnigii siddeed iyo mustaqbalka of University waxaa ka halis in ka badan hal mar. Waxaa lagu leeyahay ay badbaado ugu dambeyntii in xaqiiqda ah in uu lahaa awood kaliya ee fiqiga Protestant in Bavaria. Waxaas ma sii waday in ay ka jiraan, dhammaan ardayda Bavarian ee fiqiga Protestant, kuwaas oo tirada ay si weyn u koray oo sabab u ah is-dhexgalka dhawaan Franconia ee Bavaria, ayaa lagu qasbay lahaa inaad wax ka barato ka baxsan Bavaria.
1818 - Schloss waxaa si rasmi ah ugu deeqay Jaamacadda
In 1818, Jaamacadda helay tiro badan oo dhismayaal cusub. dhimashada Sophie Caroline ka dib markii, xaaskiisa labaad ee aasaasihii Jaamacadda, kuwaas oo daganaa sida uu Dowager tan iyo Erlangen 1764, King Maximilian waxaan Joseph ee Bavaria deeqay Schloss ah, Schlossgarten ah, hore orangery oo kale dhismooyinka ay leedahay margraves si Jaamacadda.
Qeybtii hore ee qarnigii sagaal iyo sidoo kale arkay dib u habaynta weyn ee fikirka ah waxbarashada jaamacadda Wilhelm von Humboldt ee, taas oo uu ku dooday in isku darka ee cilmi-baarista iyo waxbarashada. Khudbooyin oo markii hore ku urursan on hab si adag exegetic inay shuqullo Heerka haatan diirada saarayaa habka waxbarasho tacliinta iyo cilmi-baarista ku hanuunin madax banaan.
1824 - Isbitaalka University Erlangen waxaa la aasaasay
Dhismaha Isbitaalka Jaamacadda Erlangen, isbitaalka in qaybta bari ee Schlossgarten ah, waxaa mashruuca dhismaha weyn marka hore sameeya University oo la soo gabagabeeyey 1824. Horumarinta degdeg ah xagga kala sii kordhaya ee u dhexeeya maaddooyinka, iyo goobaha cilmi baarista cusub ee daawada iyo sayniska ee qeybtii labaad ee qarnigii sagaal iyo tobnaad daruuri dhismaha dhismayaasha cusub badan oo Schlossgarten iyo weheliyaan Universitätsstraße, taas oo u yimid si ay u sameeyaan muhimka ah ee Jaamacadda. The dhismayaasha ugu weerarka ka mudadaas waa Kollegienhaus ah (1889), anatomy iyo cudurada dhismayaasha (1897 iyo 1906) iyo Maktabadda Jaamacadda (1913).
1890 - University waxay leedahay celcelis ahaan hal kun oo arday
Ballaarinta ee size gacanta ee gacanta raacay abuurka waaxda cusub badan la machadyada dhexdeeda taas oo, wuu ka duwan yahay waaxaha ee, ma aha oo kaliya baray nidaamo tacliinta laakiin sidoo kale cilmi baaris madax banaan. lambarada Ardayga sidoo kale kor u muuqata in qeybtii labaad ee qarnigii sagaal iyo tobnaad. In semester xagaaga 1890, tirada ardayda ku diiwaangashan kaalinta ay 1000 sumadda markii ugu horeysay,
taasoo la micno ah in University kaalinta tirada 15 ka mid ah 21 jaamacadaha ku yaalla Empire Jarmal ah marka la eego size. horumarinta Tani waxay sidoo kale si qoto dheer beddelay xidhiidhka ka dhexeeya jaamacadda iyo magaalada. Halka image Erlangen ee qarnigii siddeed iyo tobnaad la goostay by Xirfado Huguenot iyo farsamada gacanta, qarnigii sagaal iyo tobnaad University waxay bilaabeen inay kaalin sii kordhaysa muhiim ah ka ciyaaraan.
Waxaa ka mid ah macalimiinta ugu caansan kaas oo baray at University waxay ahaayeen fiqi Adolf von Harleß, garyaqaan Christian ah ee farxad, professor ee dawada Franz Penzoldt, taariikhyahan Karl Hegel, falsafo Ludwig Feuerbach, professor of German Benno von Wiese, professor ee waxbarashada bariga iyo Abwaan Friedrich Rückert, xisaabyahan ah Max Noether, jirka ah Eilhard Wiedemann, farmashiye ku Emil iyo Otto Fischer, botanist ku Johann Christian Daniel Schreber, farmasiiyada ee Theodor iyo Ernst Martius, xayawaan ah Enoch Zander, iyo geologist ee Bruno von Freyberg.
Qaar ka mid ah ardayda caanka Erlangen 's waxaa ka mid ah theologist ah Wilhelm Löhe, yaqaan iyo statesman Prussian Karl Freiherr von Stein Old Stone ah, dhakhtarka Samuel Hahnemann, qorayaasha ka Heinrich Wackenroder, Ludwig Tieck, Daniel Schubart iyo August Graf von Platen, farmashiyaha Justus von Liebig, jirka ah Georg Simon Ohm iyo xisaabyahan ah Emmi Noether.
1920 - The Pro-Raktarka noqdo Raktarka
dillaacay of War World First ee 1914 ayaa saamayn badan ku Jaamacadda. Oo maalintii ugu horeysay ee abaabulka, Kollegienhaus ah , Schloss oo dhowr ah waaxaha ugu Universitätsklinikum Erlangen ayaa beddelay isbitaallada dhaawaca. Qiyaastii saddex meelood meel ka mid ah ardayda ayaa la saameeyeen qasabka ah ama diiwaan gelinta iskaa wax u qabso. Tani waxay keentay in ay hoos u weyn ee tirada ardayda sii waday in ay bartaan. Inta lagu guda jiro sano ee dagaalka waxaa sida caadiga ah oo kaliya oo ku saabsan 300 ardayda ku sugan Erlangen.
The dhacdooyinkii Bavarian Revolution ee 1918 iyo 1919 oo la baabiiyo ku xiga ee Boqortooyada ee loogu tala galay in horyaalka 'Birmingham Magnificentissimus' kaas oo markii hore ku dhashay by Boqortooyada talada haya hadda la waayay. Sidaa darteed xafiiska Pro-Raktarka beddelmay si 'Birmingham (Magnificus)'in 1920. Sidoo kale, ereyga 'Pro-Raktarka' bedelay horyaalka hore 'Exprorektor'. Ardayda ugu badan, sano isla markiiba ka dib dagaalkii koowaad ee aduunka ayaa lagu calaamadeeyay by saboolnimada iyo arday badan oo ka soo jeeda saboolka ah si ay University u yimid in rajada dhismaha mustaqbalka cusub naftooda inkastoo ay waxbarasho suubban.
Sicir-bararka iyo kicitaan ururada deeq badan oo ku daray in ay dhibaatada haysata. Guddiga Wakiillada Ardayga waxaa la aasaasay bishii 1919 oo waxaa raacay in 1922 by waxa hadda waa Studentenwerk ah (Adeegyada Ardayda) taas oo, in 1930, furay Studentenhaus in weli taagan maanta Langemarktplatz. On oo dhan, si kastaba ha ahaatee, ka dib markii ay koritaanka saa'idka ah ee bartamihii qarnigii sagaal iyo tobnaad, 1920 waxay ahaayeen muddo fadhiidka for University.
1928 - The Kuliyadda Sayniska waxaa la aasaasay
Muhiimadda sii kordhaya oo ka mid ah cilmiga dabiiciga ah in noqday si cad qeybtii labaad ee qarnigii sagaal iyo tobnaad keentay in isbeddel ku dhacay qaab dhismeedka University ee. In 1928, cilmiga dabiiciga ah la kala off waxa markaas ahaa Kulliyadda Humanities iyo cilmiga bulshada oo la siiyey xaaladda awood of iyaga u gaar ah.
1933 - The University ee madaxbannaani ugaadha dhaco Socialism Qaranka
cimilada A wadaninimo of opinion mar hore si cad u ahayd in caddayn University ee Erlangen inta lagu guda jiro Republic Weimar ah, iyo November 1929, Ururka Socialist Ardayda Qaranka Jarmal helay aqlabiyad buuxda ee kuraasta doorashooyinka Guddiga Wakiillada Student markii ugu horeysay ee jaamacad kasta oo Jarmal. Inta lagu jiro sannadaha ee kaligii talisnimada Nazi, Erlangen lama tudhay mid ka mid ah dhacdooyinka in sidoo kale ka dhacay jaamacadaha kale, sida casaankii la Professor dooneyn inay suulka line xisbiga, shidi kitaabka May ee 1933, ama mid noqoshada ee maadooyinka in ekaadaan fikirka Nazi, sida 'cilmi tartanka'.
madaxbannaani tacliinta The University ee laga saaray inta lagu jiro mudada Nazi iyo mabda'a Fuhrer ah ayaa sidoo kale codsatay in ay dastuurka jaamacadda, sida Raktarka waxaa mar dambe loo doortay by jidhka professorial laakiin waxaa loo magacaabay by Reichsminister arrimaha tacliinta. Sida ka dhacay jaamacadaha ku yaalla Germany waqtigan, tirada ardayda ee Erlangen si weyn hoos u sabab u ah siyaasadda Nazi waxbarashada.
1945 - Jaamacadda ayaa Oo Qaliin dib u dhiska
By dhamaadka dagaalkii labaad ee dunida, Erlangen ahaa magaalada jaamacadda kaliya ee Germany, kale oo aan ahayn Heidelberg, kaas oo ku dhowaad oo gebi ahaanba ka baxsaday baabba '. Ardayda, awelna loola University marka waxbaridda u bilaabay in simistarka jiilaalka 1945/46, oo waxaa jiray shan jeer ardayda ugu badan ee dagaalka ka hor. Halka in semester xagaaga 1927 ay jiraan lahaa 1340 ardayda iyo toban sano ka dib ay jiraan lahaa 967, by semester xagaaga 1947, Jaamacadda lahaa 5316 ardayda.
Si kastaba ha ahaatee, sida jaamacadaha kale ee dalka Jarmalka si tartiib tartiib ah loo furay albaabada, lambarada in Erlangen waxay bilaabeen inay soo daadiyaa dhamaadkii 1950, si ay simistarka jiilaalka 1956/57, Erlangen ahaa jaamacadda ugu yar ee West Germany.
Jaamacadda ayaa hadda loo baahan yahay si ay u siiyaan dhismayaasha cusub ku filan oo ay hooy dhammaan waaxyada iyo machadyada ay. In isku day ah in loo ilaalin lahaa dabeecadda University ee la dhismayaasha shaqsi ay wada habeeyo bartamaha magaalada, dhismaha cusub ee aan la dhisay on site campus xarunta magaalada go'doonsan a, sida ay ahayd xaaladda meelo kale, laakiin halkii dhisay on noocyo kala duwan oo ah goobaha dhexe oo ay hore u adeegi ujeedooyin kale.
Tani waxa ay ahayd kiiska la xeryaha jir Bismarckstraße, halkaas oo adag cusub ee sharciga, fiqiga, insaaniyadda sayniska arrimaha bulshada ayaa lagu soo bandhigay in 1953. dhismayaasha cusub dheeraad raacay in bartamaha magaalada, gaar ahaan Kulliyadda Daawada, sida Department of neurosurgery ee 1978, taas oo la dhisay on Schwabachanlage halkaas oo horay rugta maskaxda ayaa istaagay.
The ballaarinta ugu caan ah oo ka dhacay Jaamacadda 1960 duurka u joogay of injineernimada. The-dagaal post baahan in la casriyeeyo qaxtootiga ay ku darto waaxda a of injineernimada, doonayo in la muujiyay sida ugu 1903. Shaqaalaha Kuliyadda Sayniska hadda muujiyeen baahida loo qabo awood madax bannaan, waayo, injineernimada korontada iyo farsamo, oo waxaa la siiyey taageero ka duqowdii in 1957.
1961 - The Kuliyada Business, Dhaqaalaha iyo Cilmiga Bulshada waxaa la aasaasay
Wax yar ka dib markii lagu daro kuwan, University ballaariyeen jihada ka duwan iyagoo kaashanaya kuliyadaha degmadu maal-ganacsiga, dhaqaalaha iyo bulshada ee cilmiga ee Nuremberg, asaasay 1919, galay Jaamacadda si ay u sameeyaan waxa markaas ahayd ay awood lixaad. From ka dibna on University la ansixiyay magaca ka yar taas oo waxaa la ogsoon yahay maanta, University of Erlangen-Nuremberg.
cilmiga dhaqaalaha iyo maamulka ganacsiga, oo wuxuu lahaa ilaa dhibic this ciyaaray kaalin yar waxa markaas ahaa Kulliyadda Humanities iyo cilmiga bulshada ee Erlangen, laga yaabaa in hadda la fuliyay miisaan aad u balaaran on its site gaar ah ee Nuremberg. isku darka Tani waxay la dedejiyey koritaanka in tiro arday oo gaadhay heerkii ugu sarreeyay cusub dhamaadka 1960.
1966 - The Kuliyada Engineering waxaa la aasaasay
In 1962, ka dib dood dheer, Baarlamaanka Bavarian ugu danbeyn go'aansaday in la dhiso Kulliyadda Engineering ah ee Erlangen. In ixtiraam this, Jaamacadda ayaa ku guuleystay baxay magaalada Nuremberg oo la codsanayo in jaamacad farsamo la aasaasay Nuremberg muddo tobannaan sano ka dhanka ah.
Tan iyo meelaha ballaaran ee dhismaha dalka looga baahan yahay mashruuca ahayn laga heli karaa xarunta of Erlangen, asaaska campus ah jaamacad cusub oo la dhigay bari koonfurta magaalada in 1964. Dhismaha rasmi ah oo ka mid ah Kulliyadda Engineering, kaas oo noqday awood toddobaad ee FAU waqtiga, ka dhacay 1966. Xiligaan, Jaamacadda waxay ahayd hay'adda keliya ee Germany la awood ah injineernimada kaas oo lagu daro dhismeedka hadda jira ee jaamacadda cilmi classical oo aan qotomiyey sidii jaamacadda madaxbannaan.
1968 - dhaqdhaqaaqa ardayga wuxuu horumariyaa
si FAU, sida meelo kale, sano ee soo socda ayaa heysatay by dhaqdhaqaaqa ardayga, dhaqdhaqaaq taas oo ahayd in ay leeyihiin saamayn muddo dheer sida nolosha tacliimeed. arday dibad The, oo jaamacadaha saameeyeen Germany oo dhan, markii hore ahaayeen jawaab arrimaha ay ahaayeen Gaarna jaamacad la xiriira, sida xaaladaha waxbarasho saboolka ah. In 1969, dhaqdhaqaaqa ardayga koray more xagjirka ah oo noqday aalad mucaaradka in nidaamka siyaasadeed ee guud. In la kaashanaya kooxaha kale ee bulshada, this koray waxa noqday yaqaan dhaqdhaqaaqa mucaaradka dheeri ah baarlamaanka.
Waxaa jiray iska hor imaad weyn, gaar ahaan doodda ka badan Xeerka Tacliinta Sare ee Bavarian 1974, qaybaha oo mamnuucay wakiilada ardayda in ay gutaan waajibaadka ah siyaasadda guud, iyo in ka badan Xeerka Tacliinta Sare Jarmal ee 1976. sano waxa kale oo keenay oo ku saabsan isbedelada badan oo image dadweynaha University ee, sida dhaqamada badan oo muddo dheer la aasaasay ayaa tirtirtay. Waxaa jiray in la joojiyo Professor xiran la saarto iyo, in 1968, Ixtifaalka of Day Founder ee, ka dhintaa academicus ', taas oo ilaa markaas la qabtay quruxda Baroque ee Redoutensaal ah, lagu wareejiyay alkumay halkii yar dhaleeceyn dusha of Maximus Auditorium halkaas oo uu ka dhacay tan iyo markii.
1972 - The Kuliyadda Waxbarashada waxaa la aasaasay
The Kuliyadda Waxbarashada waxaa la dhisay 1972, noqday awood siddeedaad University ee waqtiga. Waxaa koray out of Institute for Teacher Training taas oo la aasaasay 1956 oo mar dambe la casriyeeyay ee 1958 si uu u noqdo College of Education Nuremberg, college tababar macalin, ka hor uu noqday awood a at FAU. by 2007, Jaamacadda lahaa 11 Caqlina, sida Kulliyadda Humanities iyo cilmiga bulshada waxaa loo kala qaybiyey laba kulliyadood oo madax banaan iyo Kuliyadda Sayniska waxaa daadanayaa galay saddex kale.
FAU gaaray guul cusub ee simistarka jiilaalka 1991/92 Goorma, markii ugu horeysay, oo waxay lahayd in ka badan 30,000 ardayda. Ilaa bartamihii qarnigii sagaal iyo tobnaad, ku dhowaad 40 boqolkiiba ardayda ayaa ka diiwaan gashan Caqlina Theology iyo Sharciga, laakiin laga bilaabo qeybtii labaad ee qarnigii labaatanaad boqolkiiba weyn oo dadka ardayga la soo qaadey dhinaca nidaamo cusub ee injineernimada iyo maamulka ganacsiga, dhaqaalaha iyo bulshada cilmiga.
2000 - habaynta New dhacaan
Bilowga ee qarnigii kow iyo labaatanaad, University of Erlangen-Nuremberg la soo gudboonaado loolan cusub. dheeraad ah ee dhismayaasha on Südgelände ah (koonfurta campus) iyo kacsiga ee dhismayaasha cusub ee bartamaha magaalada ayaa hadda beddelo muuqaalka jireed ee Jaamacadda. In 2000, Nikolaus Fiebiger Center ee kelli Medicine on Glückstraße bedelay dhismaha hore ee physics iyo 2001 arkay furitaanka Röthelheim ee Campus cusub on site oo ka mid ah xeryaha madaafiic jir. Wajiga koowaad ee dhismaha xarunta non-qalliinka cusub waxa la bilaabay 2002.
Jaamacadda waxay ahayd si degdeg ah u hirgeliyaan isku beddelka u degrees cusub Bachelor iyo Master ee sida qoray Wasaaradda Gobolka Bavarian of Sciences, Research iyo Fanka, iyo barnaamijyada degree, kuwaas oo bedelay barnaamijyada hore ee Diplom iyo Magister dhammaadka tobanka sano ee.
Intaas waxaa sii dheer, si ay u hayn meel tartan ku saabsan baaxadda caalami ah oo ay la kulmaan caqabado mustaqbalka, Senate u codeeyeen on 7 February 2007 si ay u fuliyaan dib u habaynta buuxa oo lagu dhismeedka University ee. Iyadoo la raacayo, in simistarka jiilaalka 2007/08, Caqlina kow iyo toban ah ayaa la habayn gelin shan kulliyadood oo Jaamacadda ayaa maanta. Caqlina Kuwan waxaa sub-qaybsan waaxda la-dhismeedka gudaha kuwaas oo loogu talagalay in lagu xoojiyo iskaashiga hadda jira iyo in la abuuro fursado kuwa cusub.
Ma rabtaa wada hadlaan University of Erlangen Nuremberg ? su'aal kasta, comments ama dib u eegista
Photos: University of Erlangen Nuremberg rasmiga ah Facebook
University of dib u eegista Erlangen Nuremberg
Ku biir si ay ugala hadlaan of University of Erlangen Nuremberg.